के रोनाल्डोले युरो कप जिताउलान्? – Tourism News Portal of Nepal
के रोनाल्डोले युरो कप जिताउलान्?
१९९८ मा जतिबेला डिडिएर डेस्च्याम्प्सको कप्तानीमा फ्रान्सले पहिलो पल्ट विश्व कप फुटबलको उपाधि जित्यो, त्यही बर्ष क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पोर्टिङ लिस्बनमा अभ्यासका लागि ट्रायल दिँदै थिए। त्यतिबेला फुच्चे रोनाल्डोको उमेर थियो १२ बर्ष। उनको क्षमता बुझेपछि लिस्बनले तत्कालै उनलाई आफ्नो युथ क्याम्पमा राख्न परिवारलाई १५ सय डलर उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो। यसको दुई बर्षपछि डेस्च्याम्प्सले फ्रान्सलाई अर्को प्रतिष्ठित उपाधि दिलाए, युरो कपको। यतिबेला रोनाल्डोको परिवार यस कुरामा आश्वस्त भइसकेको थियो, आफ्नो छोरा फुटबल खेलाडी बन्ने अभियानमा धेरै अगाडि बढिसक्यो। त्यसैले क्रिस्टियानो रोनाल्डोका पिता जोसे डिनिस एभेइरो र आमा मारिया डोलोरेसले छोराको पढाइ तत्कालै स्थगन गर्दै उनलाई फुटबलमा लाग्न प्रेरित गरे।
तिनै रोनाल्डो अहिले फरक परिस्थितिमा उभिएका छन् र उनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी छन्, उनै डेस्च्याम्प्स। विश्व कपपछि सवैभन्दा प्रतिष्ठित मानिने युरो कपको १५ औं संस्करणको विजेताको छिनोफानो आज राति पौने १ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। र, फाइनलमा भिड्दैछन्, क्रिस्टियानो रोनाल्डोले कप्तानी गरिरहेको पोर्चुगल र डेस्च्याम्प्सले प्रशिक्षण दिएको फ्रान्स। धेरैले आजको खेल डेस्च्याम्प्सले कप्तानी गरेको सन् २००० को युरो कपको सेमिफाइनलको फोटोकपी हुन सक्ने बताएका छन्। किनभने उनीहरूको बुझाईमा रातीको खेलको नतिजा २–१ आउने र फ्रान्सले जित्ने भविष्यवाणीबाट प्रेरित छ। सन् २००० मा निर्धारित समयको खेल १–१ गोलको बराबरीमा रहेको अवस्थामा समय थप भएको बेला १ सय १७ मिनेटमा जिनेदिन जिदानले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै फ्रान्सलाई फाइनलमा प्रवेश गराएका थिए।
फ्रान्सको टिममा ६ गोल गरिसकेका र सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा धेरै अगाडि रहेका एथ्लेटिको म्याड्रिडका स्ट्राइकर आट्वन ग्रेजमन जस्ता प्रतिभाशाली खेलाडी छन्। त्यस कारण पनि यस्ता भविस्यवाणी बाहिर आएका हुन्। अझ, गोलकर्ताको सूचीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो समान ३ गोल गरेका अर्का स्ट्राइकर आर्सनलका ओलिभर गिराउड, वेष्ट हामका आक्रामक मिडफिल्डर डिमिट्री पायटको रवाफिलो खेलका कारण पनि फ्रान्सको पक्षमा अड्कल लगाउनेको कमी नभएको हो। पाउल पोग्बा हालको फ्रेन्च टोलीमा अर्को यस्तो नाम हो, जसको अनुपस्थितिमा नीलो जर्सीको संरचना नै पुरा हुन सक्दैन्। युभेन्ट्सका २३ बर्षिय यि मिडफिल्डरको प्रभावशाली खेल देखेपछि इङ्ल्यान्डको महंगो क्लब म्यानचेष्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक जोजे माउरिन्होले जर्मनीका कप्तान बास्टियन स्वेन्स्टाइगरको स्थानमा आउँदो सिजनदेखि उनलाई भित्र्याउने अभियान सुरु गरिसकेका छन्।
अझ, आर्सनलका कप्तान रहेका ‘सेन्टर ब्याक’ लाउरेन्ट कोसिल्नेको बलियो रक्षापंक्तिमा उभिएको छ, फ्रान्स। उनलाई लेफ्ट र राइट विगबाट बार्सिलोनाका सामुअल उम्टीटी, युभेन्ट्सका प्याट्रीक इभ्रा, म्यानचेस्टर सिटीका बाकारे साग्ना तथा डिफेन्सिभ मिडफिल्डमा पेरिस सेन्ट जर्मनीका ब्लाज माटुडीले बलियो साथ दिइरहेका छन्। सेमिफाइनलमा जर्मनीलाई पराजित गर्न माटुडीले आफ्नो गोल पोष्टमा गजबको मेहनत गरेका थिए।
टिमको संगठनात्मक संरचनाका कारण डेस्च्याम्प्स कप्तान र प्रशिक्षकको दोहोरो भूमिकामा युरो कप जित्ने इतिहास बनाउन लालायित देखिन्छन्। तर, के संसारकै सवैभन्दा खतरनाक स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको मुखबाट यो उपाधि खोसेर डेस्च्याम्प्स सुनौलो इतिहास कोर्न सफल होलान् ? यसैमा युरो कप फाइनलको रोमाञ्चकता भरिएको छ।
रोनाल्डो मैदानमा विगतभन्दा निकै संयमित देखिन्छन्। फेरि उनलाई आफ्नो देशले फ्रान्ससँगको पछिल्लो १० भिडन्तमा कुनै पनि जित्न नसकेको धुमिलो इतिहास राम्रैसँग थाहा छ। सन् २००४ मा आफ्नै देशले युरो कप आयोजना गर्दा १८ बर्षे रोनाल्डो पहिलो पल्ट राष्ट्रिय टोलीमा देखा परेका थिए। पोर्चुगल युरो कपको फाइनल पुगेर प्रतियोगिताकै कमजोर मानिएको ग्रीससँग १–० ले पराजित बन्न पुगेको थियो। त्यतिबेला पोर्चुगलको टोलीमा लुइस फिगो, नुनो गोमेज, रुई कोस्टा र फर्नान्डो कुटोजस्ता भेट्रान खेलाडी जम्मा थिए। हालको पोर्चुगीज टोलीमा रोनाल्डो सवैभन्दा अनुभवी खेलाडी मानिन्छन्। बीचका केही बर्ष टोलीमा सिनियर खेलाडीको वर्चश्व रहँदा रोनाल्डो र अन्य खेलाडीबीचको फाटो मैदानमा प्रष्टै देखिन्थ्यो।
तर, हालको टोलीमा सवै खेलाडी उनीभन्दा जुनियर छन्। र, रोनाल्डोको नेतृत्वलाई सवैले स्वीकार गरेको देखिन्छ। आलोचकहरूले पोर्चुगलका अन्य खेलाडीको तुलनामा रोनाल्डोको शीप माथिल्लो दर्जाको भएका कारण राष्ट्रिय टोलीबाट उनी खेल्दा तालमेल नमिल्ने गरेको औल्याउँदै आइरहेका थिए। उनीहरूको अर्को भनाई पनि थियो– रोनाल्डोको क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्ने प्रशिक्षक पोर्चुगलमा छैनन्। त्यसैले प्रशिक्षकसँग उनको कुरा नमिल्ने कारण पनि यही थियो।
तर, १८ महिनाअघि प्रशिक्षक नियुक्त फर्नान्डो सान्तोषसँग उनको निकै राम्रो सम्बन्ध मानिन्छ। सन् २००३ मा म्यानचेष्टर युनाइटेडले अनुबन्ध गर्नुअघि करिब ३ महिना सान्तोषले लिस्बनमा रोनाल्डोलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यसैले सान्तोषप्रति रोनाल्डोको अगाध सम्मान छ। सन् २०१४ को अक्टुवरमा पाउलो बेन्टोलाई पद्स्थापन गर्दै पोर्चुगलको प्रशिक्षक बनेपछि टिमको सवै गम्भीर मुद्धामा सान्तोष आफ्ना स्टार कप्तान रोनाल्डोसँग छलफल गर्ने गर्छन्। यी दुईबीचको सम्बन्ध यस्तो छ– फ्रान्सविरुद्ध फाइनलमा पराजय भोगेको खण्डमा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेसी झै रोनाल्डोले राष्ट्रिय टोलीबाट राजीनामा गर्नु पर्ने दबाब बढिरहेको बेला उनले रोनाल्डोको रक्षा गरेका छन्।
रोनाल्डोको भूमिका पनि यसपालि फेरिएको देखिएको छ। समूह चरणको खेलमा गाह्रो गरेर उक्लिएको आफ्नो टोलीको हैसियत बुझेर उनी टिमका अन्य साथीहरूको मनोबल उकास्न टिम भावनासहित खट्टिएर खेलेको देखिन्छन्। समूह चरणको ३ खेलमा पोर्चुगलले कुनै पनि खेल जितेको थिएन। तीनै खेल बराबरीमा राखेर बल्ल–तल्ल अन्तिम १६ मा उक्लिएको थियो। यस युरो कपमा पोर्चुगलको प्रभावशाली खेल भनेको सेमिफाइनलमा वेल्सविरुद्ध हो। यही खेलमा निर्धारित समयमा २–० ले आफ्नो प्रतिद्धन्द्धीलाई जितेको हो। यि दुवै गोल रोनाल्डोकै प्रयासले भएका थिए। एउटा गोल उनले नै हानेका थिए भने अर्को गोल हान्न नानीलाई पास मिलाइदिएका थिए।
उनको फेरिएको भूमिकासँग डेस्च्याम्प्स राम्रैसँग परिचित छन्। त्यसैले उनले रोनाल्डोको भूमिकालाई औल्याउदै भनेका छन्– पोर्चुगलको डिफेन्स राम्रो छ। खेलाडीहरू बल खोस्न त्यति उद्देलित देखिदैनन्। उनीहरू विपक्षीसँग बल खोसेपछि तुरुन्त अगाडि हु¥र्याइ हाल्छन्। जुन जर्बदस्त छ।
वास्तवमै अहिले पोर्चुगलमा रोनाल्डो र नानीको जोडी हिट छ। नानीले पनि ३ गोल गरिसकेका छन्। विङमा रिकार्डो क्विरेस्मा र मिडफिल्डमा रेनाटो सान्चेजको प्रभाव पनि उत्तिनै छ। यसैले फाइनलमा दुवै टोली आक्रामकभन्दा पनि संयमित भएर उत्रिनेमा कुनै शंका छैन। डेस्च्याम्प्सले जर्मनीसँगै खेलेको रणनीतिलाई धेरै हदसम्म लागु गर्ने कुरा हल्लाकै भरमा भए पनि आएको छ। तर, पोर्चुगलले रोनाल्डोलाई कुन हदसम्म प्रयोग गर्छ, त्यसले पक्कै पनि खेलको नतिजा निक्र्यौल गर्नेछ। किनभने रोनाल्डो डेस्च्याम्प्सले विश्व र युरो कप जित्दा मासिक १५ सय डलर खाने खेलाडी अब रहेनन्। तीन पल्ट विश्वको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनिसकेका उनी हाल दिनमा २ लाख २४ हजार अमेरिकी डलर खान्छन्।साभार सेतोपाटी